Ike Green | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
na ike mmeghari ohuru (nke a makwaara dị ka nke dị ọcha) bụ ume niile ndị ahụ ha anaghị ebute ikuku gas ma ọ bụ ikuku ọ bụla na-emebi gburugburu. Ike ndi nwere ume ọhụrụ bụ hydroelectric, solar, wind, tidal, geothermal ma ọ bụ nke na-arụpụta biomass. Mmepụta nke ụfọdụ n'ime ha dabere na ọnọdụ ihu igwe, mana n'ozuzu ha na-achọta n'ọtụtụ a na-akparaghị ókè na okike.
Ọ bụ ezie na ụdị ike a na-enwekarị akwụkwọ akụkọ dị mma, ojiji ya nwere uru na ọghọm. Ihe akaebe ma ọ kwadoghị mkparịta ụka bụ na n'oge na-adịghị anya anyị ga-akwụ ụgwọ iji ha ebe ọ bụ na ha ga-abụ naanị ihe ọzọ ga - ekwe omume ma nwee ike ịpụ apụ mgbe anyị na - ekpochapu mmanụ ọkụ dị ka kol ma ọ bụ mmanụ.
Uru ya doro anya. Ka anyị lee ha:
Ha anaghị emerụ mmadụ.
Ha anaghị agwụ agwụ.
Ha achọghị atụmatụ nlekota maka mkpofu ha na-ewepụta, dịka ọmụmaatụ ike nuklia na-eme.
Ha na-ewepụta nnwere onwe ọzọ na mpaghara azụmahịa na nke obibi, ebe ọ bụ na, dịka ọmụmaatụ, a pụrụ iji ike anyanwụ kpuchie ike ọkụ.
Ha na eweputa oru ma weta ebe ohuru ohuru nke nyocha na ihe ohuru.
Ha anaghị etinye ụdị egwu ọ bụla maka ahụike mmadụ, ma ọ bụ na ha anaghị emetụta ahịhịa na anụmanụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ha nwekwara ọghọm, n'agbanyeghị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ha:
El nnukwu ego ego. Ha nwere ugwo mbu di elu ma ha adighi aba uru rue mgbe oge gachara, ya mere ha nwere ike ibute nsogbu itinye ego.
O nwere ike ime na oge (dabere na ọnọdụ ihu igwe), nke pụtara na nnweta ya nwere ike ọ gaghị ekwe nkwa mgbe niile.
Ha chọrọ oghere buru ibu ka ha rụọ ọrụ nke ọma. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ iwepụta nnukwu ọkụ eletrik na ogwe igwe, ị ga-achọ nnukwu mpaghara ebe ị ga-etinye ogwe ndị na-emepụta ike ndu.
Nma ọ bụ nwee ọdịdị mgbasaNke ahụ bụ, ọ bụghị ụdị ume niile nwere ike iji rụọ ọrụ ebe ọ bụla, ewezuga ike geothermal, nke dị obere karịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ chọrọ ebe ebe eriri ala nke ụwa dị gịrịgịrị ka ọgbọ ya wee rụọ ọrụ nke ọma.
Greenfọdụ ume ndụ ndụ na-ewepụta a odida obodo mmetụta. Dịka ọmụmaatụ, ikuku ikuku nwere mmetụta na mbara igwe ebe ọ na-achọ ntinye nke nnukwu ikuku ikuku, nke ndị na-ebu ya nwekwara ike ịkpata nsogbu nye ụfọdụ nnụnụ.
Ya mere, o doro anya na uru ndị ume ọhụrụ na-enye karịrị nsogbu ndị ha nwere ike ịmalite. Ọganihu nke arụmọrụ na uru nke ike ndị a dabere na ọmụmụ, nyocha na mmepe nke teknụzụ ọhụụ nke na-akwado ndị dị ugbu a ma melite ha, iji wepụta nsonaazụ ka mma na uru akụ na ụba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike Green
ANDRY CORRALES dijo
yie ihe ziri ezi
Zaghachi ANDREY CORRALES
Ike oriri na ụgbọ oloko belatara ekele maka ụdị ọhụụ
A ghaghị ime ihe ngwa ngwa megide okpomoku ụwa